Cone အကွေ့အကောက်များသောစက်, ချည်ခင်လိမ်စက်, Hanks တည်ငြိမ်မှုခံစားနေရသောလူစုများကြားစက်, ချည်ခင်နှစ်ဆတိုးသွားခဲ့ခြင်းမှာစက်-Zhuji Feihu ချည်မျှင်စက် Co. ,, Ltd မှ
Zhuji Feihu ချည်မျှင်စက် Co. ,, Ltd မှသုတေသနပေါင်းစပ်တဲ့ professional လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး, အထည်အလိပ်စက်ပစ္စည်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှု. ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 1995, က Taozhu လမ်းတွင်တည်ရှိသည်, Zhuji စီးတီး, Zhejiang ပြည်နယ်,တရုတ်နိုင်ငံ,သည်အဘယ်မှာရှိသာ 1 ကီလိုမီတာကွာဟန်ကျိုး-Jinhua-Quzhou အဝေးပြေးလမ်းမကြီးထွက်ပေါက်ကနေ, Zhejiang-Jiangxi ရထားလမ်း Zhuji ဘူတာနှင့် Xiaoshan အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကနေ 50km, ဟန်ကျိုး. အကြောင်းကိုဖုံးအုပ် 15,000 ãŽ¡, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်ကစက်ရုံကုမ္ပဏီ \_ 's သုတေသနဦးစီးဌာန၏အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်ပါသည်, ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန, ထုတ်လုပ်မှုဌာန, နှင့်ပြီးနောက် - ရောင်းအားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဌာနသို့ ...
အခြားမေးခွန်းများသို့မဟုတ်မှတ်ချက်များ? ငါတို့သည်သင်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်၏ထင်ရာပေါ်သင်တို့၏အကြံအစည်နားမထောင်ချင်ပါတယ်, ငါတို့သည်အဘယ်သို့ကပိုကောင်းစေနိုင်သည်,ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး:သင်ရောင်းချသူမှအီးမေးလ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်; အပေါင်းအဘော်တို့အဖြစ်အီးမေးလ်စားဆင်ယင်
အမိန့်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်, ကျနော်တို့ကအမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်ထုတ်ကုန်နှင့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းနဲ့ဖြန့်ဝေသည့်ရက်စွဲဆုံးဖြတ်ရန်သငျသညျကိုဆက်သွယ်နိုင်ရန်ပဏာမယူပါလိမ့်မယ်. စာချုပ်အရသိရသည်တင်ပို့ဖို့စာချုပ်အပြီးသတ်
Zhuji Feihu ချည်မျှင်စက် Co. , ကြိုဆိုပါတယ်, Ltd မှ
ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 1995. သုတေသနပေါင်းစပ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုပ်ငန်း, အထည်အလိပ်စက်ပစ္စည်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှု. တပ်ဖွဲ့သစ်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်တီထွင်ဆန်းသစ်စောင့်ရှောက်. FEIHU တင်ပို့မှု 60% ၏။.
စီမံခန့်ခွဲရပ်. အနိမ့်စွန့်ပစ် .high ထိရောက်မှု. Scale ကိုဝယ်ယူရေးနှင့်စံချိန်စံညွှန်းမီထုတ်လုပ်မှုကိုကြီးမားကုန်ကျစရိတ်အားသာချက်ပေး.
တရုတ် \_ 's ပြည်တွင်းဈေးကွက်ထဲမှာ, အများအပြားစက်ရုံများဒီဇိုင်းကနေစက်တပ်ဆင်ရန်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုမှတက်ကြွစွာအကူအညီနဲ့ပေး. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, ငါတို့သည်လည်းနိုင်ငံခြားစျေးကွက်များတွင်တစ်နေရာတည်းမှာဝန်ဆောင်မှုပေး.
client ကိုလိုအပ်ချက်လေးစားမှု, ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များ. ဖောက်သည်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အပင်အရွယ်အစားအရစက်ရဲ့အရွယ်အစားဒီဇိုင်း.
အီတလီနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံအနေဖြင့်ကြိုတင်ပစ္စည်းကိရိယာများ .Mainly ပစ္စည်းကိရိယာများတင်သွင်း.
မြင့်မားသောရပ်တည်ချက်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲစီမံခန့်ခွဲမှု. တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျနော်တို့အတွေ့အကြုံနှင့်ဂရုတစိုက် installed လုပ်သားများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိတယ်.
တွင် 1995, ကျွန်တော်စက်ကိုအကွေ့အကောက်များသော bobbin ရောင်းဖို့မြင်းငှား
တွင် 2000, ကျနော်တို့ကိုအောင်မြင်စွာအလုပ်ကြိုးစားမှုမှတဆင့်တရုတ် \_ 's ပထမဦးဆုံးအာကာသယာဉ် box ကို winder စက်ကိုတီထွင်.
ရှိပါသည် / များမှာ6- 10 ပြည်သူ့ R ကို(s ကို) ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်. အဆိုပါအင်ဂျင်နီယာချုပ်ဦးထက်ပိုအတွေ့အကြုံ 10 နှစ်ပေါင်း. အားလုံးစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်တီထွင်ဖန်တီးဖြစ်ပါတယ်. သူတို့ကပိုပြီးရိုးရှင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါလိမ့်မယ်
ချည်ခင်လိမ်စက် , ချည်ခင်အကွေ့အကောက်များသောစက်
FEIHU BRAND Cone ချည်ခင်နိုင်လွန် polyester ချည်မျှင် FOR machine BOBBIN WINDER အကွေ့အကောက်များသော
ဘယျအရာသာ 1% ထင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ 100% အရည်အသွေးအာမခံချက်!
သင်အကူအညီလိုလုပျဆောငျ?တော့ EAMIL,အမေရိကန် Chat သို့မဟုတ်ခေါ်ဆို LIVE!
ငါ့ရဲ့ဇာတ်မြင့်ဒေါ်လိုရေစ် amet ထိုင်, contuer adipiscing Elite. molestie lacus vestibulum Praesent.
Feihu CNC ချည်အကွေ့အကောက်များသောစက်ယခုနှစ်ရေပန်းစားသည် 2019-03-01
နောက်ထပ်သစ်ပင်များပိုမို GREEN 2019-03-01
thread အလေးချိန်ဇယား 2019-03-01
Kirby \_ 's Epic ချည်ခင် 2019-03-01
ဟောင်ကောင် Feeling 2019-03-01
ဆိုးလ် Love 2019-03-01
ချည်မျှင်စက် Spinning open-အဆုံး 2019-03-01
စက် winder အသုံးပြုမှုကိုအကွေ့အကောက်များသောချည်ခင် 2019-03-01
Knititn စက် Fuction 2019-03-01
သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါက, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး, ကျနော်တို့အတွင်းသင်ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည် 24 နာရီ.